Japan oo gacan ka geystey bixinta adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo carruurta Soomaaliya – Radio Daljir
Japan oo gacan ka geystey bixinta adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo carruurta Soomaaliya
Maarso 14, 2013 8:15 b 0
Muqdisho, 14 Maarso 2013 ? Dowladda Japan ayaa 15 milyan oo doolarka Mareykanka ah siisey UNICEF si ay gacan uga geysato in UNICEF ay wax ka qabato baahiyaha ballaaran ee degdegga ah ee ay qabaan carruurta Soomaaliya. Deeqda ayaa gacan ka geysaneysa dadaallada ku aaddan nafaqada, haqab-beelka cuntada, caafimaadka, waxbarashada, ilaalinta carruurta, biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda ee carruurta ugu nugul.
Maaliyaddan ayaa buugaagta akhrista ee dugsiyada siineysa 300,000 carruur ah ? oo kalabar ay yihiin gabdho. Waxaa ay 500,000 haween iyo carruur ah u oggolaaneysaa in ay helaan adeegyada caafimaadka waxaana 600,000 carruur nafaqo-xumo ba?an ay hayso ah ay ku helayaan quudin ku daweyn.
Intaa waxaa dheer saddex jeer oo waraaqo lacag ama cunto lagu beddesho oo ilaa 100 doolar gaareysa la siin doonaa 5,200 oo qoysaska ugu nugul ah ee qiimaha sarreeya ee cuntadu ay tahay sababta ugu weyn ee iska hortaagta heliddda cuntada.
Qayb ka mid ah maaliyaddan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhiso ama lagu dayactiro ilo biyood oo ay ka faa?iideysan doonaan 500,000 haween iyo carruur ah. Wacyigelin dhinaca fayadhowrka iyo nadaafadda ah ayaa sidoo kale loo qaban doonaa bulshooyinka si looga hortago cudurrada la xiriira arrimahaas.
Qaaraankan waxaa sidoo kale uu UNICEF awood u siinayaa in ay xoojiso waxqabadkeeda ku aaddan xadgudubyada waaweyn ee ka dhanka ah carruurta iyada oo loo marayo tiro waxqabadyo ah oo ay ka mid yihiin daryeel iyo taageero nafsaani-bulsho, iyo sidoo kale in bulshooyinka laga abaabulo oo laga wacyigeliyo arrimaha ay ka mid yihiin Rabshadda Ku Dhisan Jinsiga, Jarjaridda/Goynta Saxaaxa Dheddigga (Gudniinka) iyo Aqoonsashada/Soo Helidda, Qoraal ka sameynta, Baafinta iyo Dib-u-mideynta.
Carruurta Soomaaliya waxaa weli haysta haliso badan oo ay wadajir ahaan u keeneen colaad, barokac, nafaqo-xumo iyo cudur. Waxaa lagu qiyaasey 215,000 carruur shan sano jir ka yar ah ay dhab ahaan nafaqo-xumo hayso, 66% oo ka mid ahi ay joogaan koonfurta dalka.
Nisbada carruurta yaryar ee Soomaaliya ku dhimata waxaa ay ka mid tahay kuwa ugu xun dunida oo dhan. 10kii carruur ah mid ayaa dhinta ka hor inta aanu sanad jirsan.
Carruur badan oo Soomaaliya jooga ayaan gebi ahaanba iskuul tegin. In kasta oo wax badan ay soo hagaageen haddana is-qorista guud ee dugsiyada ee siddeeddii sano ee la soo dhaafey, ayaa ahayd keliya 710,860 carruur ah oo ka mid ah 1.7 milyan ee la qiyaasey in ay jiraan da?dii dugsiyada hoose ay dhigan lahaayeen ? 42 boqolkiiba carruurta ? ayaa dugsi dhigta. Carruurtaan keliya 36 boqolkiiba ayaa gabdho ah.
Keliya 33% oo ka mid ah dadweynaha ayaa heli kara biyo ammaan ah waxaana keliya 20% ay ku nool yihiin degaannada ay dhibaatadu sida ugu ba?an u taabatey ee koonfurta.
Deeqdan ballaaran oo ay Dowladda Japan bixisey waxaa ay wax weyn ka tareysaa wax ka qabashada baahiyaha ugu degdegsan waxaana ay gacan ka geysaneysaa in aasaaska loo dhigo habkii lagu dardar gelin lahaa horumarka loo sameynayo carruurta dalka.
Dhalinta da’da yar ee Gaalkacyo oo la soo gaarsiiyay agab ciyaareed
G/ KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo tababar u soo xiray 72 dhalinyaro ka shaqayn doona doorashooyinka
on Roobkii Gu’ga oo degaano Puntland ka tirsan ka curtyaySawirkaani waa qardho
on Caawa & Daljir iyo Axmed Sheekh Maxamed ‘Tallman’, Daljir Bossaso (dhegayso)Cuuke puntland guuleyso tollmaan